Istuudiyoo OMN Kaayiroo irratti saamichi raawwatame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Istuudiyoo OMN Kaayiroo irratti saamichi raawwatame
Dhimmi OMN kuni daran diiggaa akka hin babal'isnee fi summii dawaa hin arganne mooraa Oromoo keessa akka hin facaasne sodaatama.
Istuudiyoo OMN (Oromia Media Network) biyya Masrii magaalaa Kaayirootti argamu irratti saamichi raawwatamuun isaa beekame. Saamichi kuni kan raawwatame guyyaa kaleessaa naannoo sa’aa 10 humnoota ammattti eenyummaan isaanii hin beekamneen. Saamicha kanaan meeshaaleen istuudiyoo kanneen akka TV, kaameraa, ifaa fi sanadiileen addaddaa fudhatamaniiru.
Saamicha kana duubaan farriin ykn diinota Oromootu jira jedhama. Dhugattis saamicha kana farra Oromoo malee kan biraa raawwachuu hin danda’u. Farriin ergaa diinaan deeman kunniin alaa moo keessaa dhufan? Ammatti gaafii kanaaf deebiin ifa ta’e hin jiru. Garuu, eenyummaan isaaniis kan saxilamuu fi badii isaaniif kan seeraaf dhiyaatan ta’uu isaati ob.Jawaar Muhaammad, daayireektariin OMN, kan waadaa seenan. Gama biraatiin, maddiileen oduu tokko tokko samichi kuni kan raawwatame poolisii magaalaa Kaayirootiin jedhaa jiru. Poolisiin Kaayiroo seeraan dhufee sakatta’uu osoo danda’u maaliidhaaf foddaan seenuu akka filatanis wanti beekame hin jiru. Dhugaa dhimma kanaa beekuudhaaf obsaa fi qalbiin hordofuun dirqii ta’a.
Mooraan Oromoo walshakkuu fi walhamiidhaan beekamu keessatti duruu quba wolitti qabuun eegalame. Dhimmi kuni waan daran diiggaa babal’isuu fi summii dawaa hin arganne mooraa Oromoo keessa facaasu akka hin taane sodaatamaa jira. Yeroo dhihoo asi kan hojjatamuu fi odeeffamu waan hamilee Oromoo laaffisuu fi abdiin diinaa akka lalisu taasisudha. Imalli qabsoo Oromoo gara halayyaatti dhiibaa jiru kuni dafee dhaabachuu qaba.
OMN tibbana tamsaasa isaa Afaan Arabaatiin eegaluun isaa mooraa Oromoo fi kaambii Woyyaanee kessatti daaraa kaasaa tureera. Dhimmi saamicha istuudiyoo OMN kuni jaarmayaan kuni Afaan Arabaatiin tansaasuudhaaf murteessuu isaan wolqabatuu fi dhiisu isaa ammatti ifaa miti.
oromoo kaayiroofi masrii
Previous articleRuuziin sobaa laastikii irraa tolfame seensa Naayjeeriyaa irratti qabame
Next articleHorsiisee-bultoonni miliyoona 2 ol ta’an gargaarsa hatattamaa hin argatan taanaan lubbuun isaanii balaaf saaxilama jedhama